Himalaya Dainik » प्रभु देवाले आफ्नै भान्जीसंग बिवाह गर्दै ?
प्रभु देवाले आफ्नै भान्जीसंग बिवाह गर्दै ?
एजेन्सी – निर्देशक, अभिनेता तथा कोरियोग्राफर प्रभु देवालाई अदभूद डान्सरको रुपमा चिनिन्छ । एक ग्रुप डान्सरको रुपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका प्रभु देवा आज दक्षिण भारतीय फिल्ममा मात्रै नभई बलिउडका शीर्ष कोरियाग्राफर र निर्देशकको रुपमा पनि परिचित छन् ।
उनै प्रभु देवाले दोस्रो विवाह गर्न लागेको खबरले बलिउड तातेको छ । अब बिहे गरेभने उनको दोस्रो बिहे हुनेछ । टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार प्रभुले आफ्नी भान्जीसँग डेट गरिरहेका छन् । र उनीहरु चाँडै नै विवाह गर्ने तयारीमा छन् ।
यद्यपि, यी खबरबारे प्रभु देवाको तर्फबाट कुनै आधिकारि खबर सार्वजनिक भएको छैन । न त उनको समूहले नै यो खबरलाई पुष्टि गरेको छ ।
प्रभु देवाले सन् २०११ मा श्रीमती रामलतासँग सम्बन्ध-विच्छेद गरेका थिए । प्रभु देवा र रामलताका तीन छोरा छन् । प्रभुको सम्बन्ध-विच्छेद हुनुअघि उनको नाम दक्षिण भारतीय फिल्मकी सफल नायिका नयनतारासँग पनि जोडिएको थियो ।
आज काग तिहार: कागलाई मीठो मीठो खान दिएर मनाइँदै
आज कात्तिक २८ गते शुक्रबारको राशिफलः यी ७ राशिका लागि शुभ
सेतो लुगामा निस्किएकी अभिनेत्री मलाइकाको खुट्टा कालो देखिएपछि…
अध्ययनले भन्छ- नियमित स म्बन्ध नराख्ने महिला चाँडै बुढी हुन्छन्